ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: မြန်မာပြည်လို့ ခေါ်တဲ့နေရာ
တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ ထိထိရှရှ ရှိတဲ့ ကဗျာကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ။
ဖတ်ဖူးပြီးသားပေမယ့် ထပ်ဖတ်ပြီး ထပ်ခံစားသွားပါတယ်။
Congratulation madam Paw!!! ပုံဖေါ်ထားတာရော ကဗျာလေးပါ သိပ်ပြီး အသက်ဝင်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပါတယ်။
မေ့ကျန်ခဲ့လို့ - ကိုပေါကို ကျောသွားပြီနော့်။ တော်ကြာ ကိုပေါက သူ့ထက် လူကြိုက်များသွားမှာစိုးလို့ မနာလိုအဖြစ်ပြီး ရေးခွင့်မပြုပဲနေလိုက်ဦးမယ်။ အရည်အချင်းတွေ အကုန်မထုတ်ပြနဲ့နော့်။
ကာလရှည်ကြာ နေခဲ့တဲ့ နေရာ...တဲ့လား
ဒီအတိုင်းဆို ကိုပေါတော့ ပင်စင်ယူလို့ရပြီ။
နောက်ဆို အစ်မကြီးပဲရေးတော့နော်....း)
KP @ JP
ကိုယ်ပိုင်ကိုယ့် ဟန်နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်သန်တော
အပြစ်လုပ်ထားလို့ ကြောက်ရွံနေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှု့ မျိုးလို့ မြင်ပါတယ်။
အေးဗျာ.... မခင်ဦးမေရေးတာ ဖတ်ရတော့....
ကျနော်တော့ ကိုယ်မွေးခဲ့ရာ အင်းလျားလမ်းက အိမ်ကို သတိရတယ်။ ခြံကျယ်ကြီးထဲက နှစ်ထပ်အိမ်။ နောက် ၁၀ နှစ်သားလောက်မှာ ရွှေတောင်ကြားမှာ နောက်ထပ် အိမ်တလုံး ထပ်ဝယ်တော့ ၅ နှစ်လောက် သွားနေဖြစ်သေးတယ်။ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ ဝင်ဒါမီယာက တထပ်တိုက်ပုလေးမှာ တယောက်တည်း သွားနေဖြစ်တာများတယ်။ ကျောင်းပြီးတော့ လှိုင်သာယာမှာ ပြောင်းနေတယ်။ အခုတော့ စင်္ကာပူမှာ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ပေါ့။
တကယ်တော့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဘဝက အလွတ်လပ်ဆုံးပါ။
ခြေသလုံးအိမ်တိုင် = အိမ်တိုင်ကဲ့သို့ တုတ်ခိုင်သော ခြေသလုံး။
=========> ရယ်လိုက်ရတာ၊ အဲလို အသောလေးတွေက ကိုပေါမှ ရတာ။ sign in လုပ်ရမှာ ပျင်းလို့ ဒီမှာလာရေးတာ။ တုတ်ခိုင်သော ခြေသလုံးများကို မြင်ယောင်ရင်း၊ Giant ဘရန့်ကိုမှ ဝတ်တတ်သူ ကိုပေါ၊ ရှဲဒိုးရေးပီး မဒမ်ကို ဆွဲခေါ်နေတာလား၊ အစထဲက မဒမ်က ကိုပေါကို ရှဲဒိုးရေးပေးနေတာလား လား လား
အာ... ခရေဖြူကလည်း.. ကျနော်ရေးရင် ဒီထက် အများကြီး ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျ...ငှဲငှဲ။
မဒမ်ပေါရဲ့ ကဗျာကို အားပေးသွားတဲ့ ဘလော့ဂ်ဖတ်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မဒမ်ပေါရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်က တချို့စာလေးတွေကို ကောင်းနိုးရာရာ ကောက်နှုတ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တင်ဆက်သွားပါဦးမယ်။
ကဗျာလေးက တကယ်ကောင်းတယ် ၊ တိုတို နဲ. အဓိပ္ပါယ် ထိမိပါတယ် ၊
နှစ်ယောက်စလုံး ပို.စ်တွေရေးနေတယ် ဆိုတော့ " မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက် ဆိုတာလား "
Hi Ko Paw & Ma'am Paw,
I amaregular reader here but never use to leave any comment. But i have to leaveacomment here this time as I really really like her poem. A very good piece of poem and hope you would be able to produce more :)